कसरी खुसी राख्ने प्रेमिकालाई ? यस्तो छ केहि उपाय - ज्ञानविज्ञान
यसका लागि ब्वाइफ्रेन्डसँग केही टि्रक्स भने हुनैपर्छ । जस्तो,
जब कुनै युवती प्रेममा पग्लन थाल्छे, उनीहरुलाई ब्वाइफ्रेन्डको साथ चाहिन्छ । उनीहरु ब्वाइफ्रेन्डको सामिप्यता चाहन्छन् ।यस्तो अवस्थामा उनीहरुको चाहानालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । गर्लफ्रेन्डसँग समय बिताउने प्रयास गर्नुपर्छ । हरेक दिन भेट्न संभव नभएपनि उनीहरुको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । गर्लफ्रेन्डमा यस्तो महसुष हुनुपर्छ कि, मेरो ब्वाइफ्रेन्ड सधै मेरो साथमा छ । यसले उनीहरुमा प्रेम र सुरक्षाको भाव जगाउँछ ।
Topics #उपाय #प्रेमिका
Don't Miss it सुपारी सेवन गर्दा यस्तो समस्या हुनसक्छ
Up Next यस कारण पेटमा ग्यास भरिन्छ जनिराखौ
यसरी बनाउनुस् स्वादिष्ट आलु र भेडेखुर्सानीको परिकार
आलु र भेडेखुर्सानीको परिकार अत्यन्त स्वादिष्ट हुन्छ र यसलाई बनाउन धेरै समय पनि लाग्दैन । स्वास्थ्य र पोषणयुक्त यो तरकारी…
कुन–कुन चिज तामाको भाडामा राख्नुहुन्न ? जान्नुहोस
तामाको भाडामा राखेको पानी स्वास्थको लागि फाईदा हुन्छ । तर अन्य खानेकुराहरु तामाको भाडामा राखेर खादा स्वास्थमा नोक्सान पुग्छ । तल…
हाम्रै घरको भान्छामा हुने तरकारीहरुले कुन कुन रोग ठिक पार्छन्, खाने तरिका सहित
यस्ता पार्टनर, भएका मानिस भाग्यमानी हुन्छन
खुसीको खोजी पार्टनरको अनुहार सधै हँसिलो होस्, खसी होस् भन्ने चाह राख्ने पति/पत्नीलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्ता पति/पत्नी पार्टनरको…
कफी पिउनुका १३ फाइदाहरु
कफीले स्वास्थ्यलाई पुर्याउने फाइदाबारे विभिन्न अनुुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । संसारमा यस्ता धेरै मानिस छन् जो एक कप कफी नपिई…
यस कारण खीईन्छ दाँत, जानी राखौ
दाँत पनि हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंगमै पर्छ। दाँत न हुदा कस्तो देखिन्छ होला ? अनुहारमा सुन्दरताको लागि दाँत पनि…
खतरनाक रोगबाट जोगिन्छ, दैनिक एक कोसो केरा खानाले
शरीरमा बढी भएको एसिडिटीलाई केराले तटस्थ बनाइदिन्छ । तापक्रम नियन्त्रण अन्य फलफूलको तुलनामा केरा निकै शान्त फल हो । दैनिक…